BNI arrests Omari Wadie over fake Mahama sex photo | (comment 9278898)
Comment: Etua wo nyonko ho a etua dua mu.........
RE -SGT ANANE-AKUFFO IS NOT A PRESIDENT!
okoto de3 nebo tw3 nyannyankyere de3 wonko NDC....Mokae se nana addo koy33 program bi wo GTV,NDC foo se nana akososo obaa nufu. Saa mere no national security na mo wohe.Otu konnoh, anita the soso and co. Etua wo nyonko ho a wose etua duamu.wede3 wasoso mu oo wofa no.taboo eno ne egya hyehye3 noa ghana foo enti ase3 no and bad economy that is going on.
Etua wo nyonko ho a etua dua mu.........